malawi - Nyambo dzino kodza mwoyo
Nyambo dzine tag 'malawi'
malawi dofo jongwe jarzin
Mbava yaka tora chikwama chemumwe musekuru weku Malawi. Mbavha yakatanga kumhanya ichitiza sezvo panga pari pachiteshi chemuguta guru. Mbava isati yaenda kure yakaona chikwama chiye chobhururuka chichienda seshiri. Sekuru vanova muridzi wechikwama vakadaidzira vachiti:
"zuva rauchabata shiri iyoyo ndiro rauchafunda kufamba." Mbavha yakatanga kukambaira semucheche.
malawi mbavha sekuru chitima
malawi mutyairi rufu zupco nyama hama